J: Health - Giant Huge Big Large BABY! အလွန်ထွားသော မွေးကင်းစကလေး
Health - Giant Huge Big Large BABY! အလွန်ထွားသော မွေးကင်းစကလေး
Comparsion of normal baby with giant boy
အသက် ၃၈နှစ်ရှိ Trisha Lightwood အမျိုးသမီးသည် ၈နာရီကြာအချိန်ယူ ကာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ယောင်္ကျားလေးကို တွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ၁၃ပေါင် ၆အောင်စ အရွယ်သားငယ်မှာ ၆လသား သာမာန် မွေးကင်းစကလေး များထက် ၆လသား အရွယ်မျှ ကြီးမားနေသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် နေစဉ်အတွင်း သနွေသားလေးမှာ ၁၀ပေါင် ၁၅စတုံ ရှိလေသည်။ သာမာန်ထက် လွန်စွာ ကြီးမား နေသဖြင့် ၁၀ရက်နောက်ကျမှ မွေးခဲ့သည်။ မွေးချိန်တွင် မိခင်မှာ သွေး၃ပုလင်းစာမျှ ကုန်ခမ်းခဲ့သည်။ မွေးချိန်တွင် ကလေးမှာ ပုခုံးမှာ ထွက်မရသဖြင့် အသက်ရှုရပ်ပြာနှမ်းနေသည်။ သားဖွားသည် ၃ဦးမှာ ခက်ခဲစွာ မွေးဖွား ခဲ့ရသည်။
၁၉၉၂ခုနစ် တွင် ကမ်ဘရီးယား Cumbria မြို့ နယ်တွင် ၈ိုင်ကား Guy Carr ဆိုသူ ကလေး မှာ ၁၅ပေါင် ၈အောင်စမွေးခဲ့သည်။ ၁၉ရာစု နစ်အတွင်းတွင် ကောန်ဝေါ Cornwall နှင့် ခရူဝီ Crewe တွင် အလေးချိန် ၂၀ပေါင် ရှိသော ကလေးများ မွေးဖွား ဖူးကြောင်း သိရသည်။ (8/11/07)
True story - Twin
Health - four kidneys inside this girl
Health - A girl with the Wings
Health- ခနွာကိုယ်အပြင်ရောက်နေသော နှလုံး
Health - မိခင်က တချိန်ထဲမွေးပေမဲ့ အမွှာမဟုတ်ပါ
Health - Giant Huge Big Large BABY! အလွန်ထွားသောေ...
Health - quins..
Health - 1 ကျန်းမာရေး နှင့် ဓလေ့ထုံးစံ - လက်ရည်တြ...
ကြောက်တင်ဗုံး - ၅
New year wish -
News - Snow နွေ မှာဝေတဲ့ နှင်း
Health - smoking ဆေးလိပ်
Health - Smoking ဆေးလိပ်သောက်ကြအုန်းမလား
Poem5- ရူပမောင် ရဲ့ အသဲ